Medjugorje: la veggente Vicka ci dice alcuni segreti sulle apparizioni | PREGHIERA&NEWS
Medjugorje: Vicka nke hụrụ ọhụụ na-agwa anyị ụfọdụ ihe nzuzo banyere ngwa
Paolo Tescione	Edere ya June 10, 2020 June 10, 2020
Janko: Mgbe chi bọrọ, ya bụ, ụbọchị nke atọ pụtara. Mmetụta ahụ, dịka ị gwara m otu oge, toro na-arịwanye elu, n'ihi na n'oge ahụ, dịka ị na-ekwu, ị nabatarala onwe gị na Nwanyị anyị. Ndi ntre ama esinam fi akan?
Vicka: Ee, n'ezie. Mana enwere nhụjuanya, n'ihi na onweghị onye ma ihe na-eme na ihe ga-esite na ya.
Janko: O nwere ike iju gị anya na ị ga-aga ebe ahụ ma ọ bụ na ị gaghị aga?
Vicka: Mbanụ! Nke a mba. Anyị na-ele anya elekere isii nke ehihie. N'ụbọchị, anyị na-eme ihe niile ngwa ngwa ka anyị wee nwee ike ibili ebe ahụ.
Janko: Sonu gara n’ụbọchị ahụ?
br> Vicka: Chọpụta. Anyị tụrụ ụjọ ntakịrị, mana Nwanyị Nwanyị anyị dọtara anyị. Ozugbo anyị pụrụ, anyị kpachara anya ebe anyị ga-ahụ ya.
Janko: wentnye gara ụbọchị nke atọ?
Vicka: Anyị bụ na ọtụtụ ndị mmadụ.
Janko: arenye ka ị bụ?
Vicka: Anyị bụ ọhụụ na ndị mmadụ.
Janko: you gbagote na Madonna anọghị ebe ahụ?
Vicka: Ma ọ dịghị ihe ọ bụla. Gini mere i ji agba oso? Nke mbu anyi jere ije n'uzo elu ulo nile, na acho na Madonna putara.
Janko: Andnu ahula ihe obula?
Vicka: Dị ka ihe ọ bụla! N’oge na-adịghị anya, ọkụ malitere ịgba ugboro atọ ...
Janko: Gịnị kpatara ìhè a? Ọ bụ otu n’ime ụbọchị ndị kachasị ogologo n’afọ n’afọ; anwụ dị elu.
Vicka: Anyanwu di elu, ma Madonna jiri igwe ya choro igosi anyi ebe O no.
Janko: whonyekwa hụrụ ìhè ahụ?
Vicka: Ọtụtụ ndị ahụla ya. Amaghị m ole. Ọ dị mkpa na anyị ndị ọhụụ ahụla ya.
Janko: Did hụrụ naanị ìhè ma ọ bụ ihe ọzọ?
Vicka: Igwe ọkụ na Madonna. Gịnịkwa ga-abụ naanị ìhè ahụ ga-ejere anyị ozi?
Janko: Olee ebe Nwanne anyi no? n'otu ebe dị ka ụbọchị abụọ mbụ ahụ?
Vicka: Mba! Ọ bụ n'ebe a kpamkpam dị iche.
Janko: Nke di elu ka o di ala?
Vicka: Ego, karie elu.
Janko: Ma gịnị kpatara ya?
Vicka: N’ihi gịnị? And gara jụọ Madona!
Janko: Marinko gwara m, ebe ọ nọnyeere gị n’ụbọchị ahụ, na ihe niile mere n’okpuru okwute, ebe enwere obe ochie. Eleghi anya na ili ochie.
Vicka: Amaghị m ihe ọ bụla gbasara nke a. Enwebeghị m ebe ahụ tupu mgbe ahụ ma ọ bụ.
Janko: Ọ dị mma. Kedu ihe ị mere mgbe ị hụrụ ya, dị ka ị na-ekwu?
Vicka: Anyị na-agba ọsọ dị ka à ga-asị na anyị nwere nku. Enwere ogwu na okwute n’ebe ahụ; ọrịrị ahụ siri ike, nkpoda. Ma anyị gbara ọsọ, anyị fega dị ka nnụnụ. Anyị niile gbara ọsọ, anyị na ndị mmadụ.
Janko: So nwere ndị ha na ha nọ?
Vicka: Ee, agwala m gị.
Janko: Mmadụ ole ka ha nọ?
Vicka: Onye gụrụ ya? E kwuru na ihe karịrị otu puku mmadụ. Enwere ike karịa; n'ezie ọtụtụ ndị ọzọ.
Janko: you ha niile gbara oso ebe a na ngosiputa nke ìhè?
Vicka: Anyị bu ụzọ, na ndị anyị n’azụ.
Janko: you chetara onye bu onye biara na Madonna?
Vicka: Echere m na Ivan.
Janko: Kedu Ivan?
Vicka: The Madonna si Ivan. (Nke a bụ nwa Stankoj).
Janko: Obi dị m ụtọ na ọ bụ ya bụ nwoke, onye buru ụzọ rute ebe ahụ.
Vicka: Ọ dị mma; ụrịa ọ !ụ!
Janko: Vicka, m kwuru naanị dị ka egwuregwu. Kama gwa m ihe ị mere mgbe ị biliri.
Vicka: Obere iwe were anyị, n'ihi na ọzọ lvanka na Mirjana nwetụrụ obere ụfụ. Mgbe ahụ anyị raara onwe anyị nye ha, na ihe niile gafere ngwa ngwa.
Janko: Gịnịkwa ka Nwanyị nwanyị anyị na-eme ugbu a?
Vicka: Ọ gara. Anyị bidoro ikpe ekpere, ya alọta.
Janko: Kedu ka o siri dị?
Vicka: Dika ubochi gara aga; naanị, ọbụna nwee obi ụtọ. Ebube, na-amụmụ ọnụ ọchị ...
Janko: Ya mere, dị ka i kwuru, ị fesara ya?
Vicka: Ee, ee.
Janko: Ọ dị mma. Ihe a na-atọ m ezigbo ụtọ. Gini mere i ji fesa ya?
Vicka: know maghị kpọmkwem etu o siri mee. Ọ dịghị onye maara nke ọma onye ọ bụ. Onye kwuru nke a na onye kwuru nke ahụ. Anụtụbeghị m ruo mgbe ahụ ka Setan nwekwara ike ịpụta.
Janko: Otu onye chetara na Setan na-atụ egwu mmiri dị nsọ ...
Vicka: Ee, ọ dị mma. Ọtụtụ oge anụrụla m nne nne m ka ọ na-ekwughachi: "Ọ na-atụ egwu dịka ekwensu nke mmiri nsọ"! N’ezie, ụmụnwanyị ndị okenye gwara anyị ka anyị fesa ya mmiri dị nsọ.
Janko: Mmiri a dị nsọ, olee ebe ị si nweta ya?
Vicka: Ma gawa! Kedu ihe kpatara ị chọrọ ịbụ onye India ugbu a? Dị ka a ga-asị na ị maghị na n'ụlọ Onye Kraịst ọ bụla enwere nnu na mmiri a gọziri agọzi.
Janko: Ọ dị mma, Vicka. Nwere ike ịgwa m onye kwadebere mmiri dị nsọ?
Vicka: M na-echeta ya dị ka a ga - asị na m hụrụ ya ugbu a: nne m mere ya.
Janko: Ma olee otu?
Vicka: Kedu, ị maghị? O tinyere nnu na mmiri, naanị ya agwakọta. Ka ọ dị ugbu a, anyị niile na-agụghachi okwukwe.
Janko: Onye butere mmiri?
Vicka: Amaara m: Marinko anyị, oleekwa onye ọzọ?
Janko: whonye fesara ya?
Vicka: M fesa ya n'onwe m.
Janko: Ndi ama ototop enye ọduọk mmọn̄?
Vicka: Akpachapụrụ m ya ma kwuo n’olu dara ụda, sị: «Ọ bụrụ na ị bụ Nwanyị Anyị, nọọ; ọ bụrụ na ịnọghị, pụọ na anyị ».
Janko: Gịnwa kwanụ?
Vicka: Ọ mụmụrụ ọnụ ọchị. Echere m na ọ masịrị ya.
Janko: you kwughi ihe ọ bụla?
Vicka: Mba, mba.
Janko: Kedu ihe ị chere: ọ dịkarịa ala ntakịrị mmiri dakwasịrị ya?
Vicka: Olee otu? Agara m egbughị ya!
Janko: Nke a na-adọrọ mmasị. Site na ihe a niile m nwere ike ịchọpụta na ị ka na-eji mmiri dị nsọ agba ụlọ na ihe ndị dị ya gburugburu, dịka a na-ejikwa ya n'oge m bụ nwata.
Vicka: Ee, n'ezie. Dị ka a ga - asị na anyị abụghị Ndị Kraịst!
Janko: Vicka, nke a dị mma ma enwere m obi anụrị banyere ya. You chọrọ ka anyị ga n'ihu?
Vicka: Anyị nwere ike rụọ ya. Ma ọ bụghị ya, anyị agaghị enweta njedebe.
Nke gara aga Post Gara aga post:Anyị ekwenyere na akara aka? Chineke ò keelarị ọdịnihu anyị?
Next Post → Post ozo:Chee echiche banyere ihe ịchọrọ iji "dozie onye na - emegide gị" taa